कुलमान घिसिङलाई पुन: नियुक्ति गर्न जनतादेखि कलाकारको माग – Dainik Sangalo
कुलमान घिसिङलाई पुन: नियुक्ति गर्न जनतादेखि कलाकारको माग
September 15, 2020 309
काठमाडौं ३० भाद्र / नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारश्र प्रमुख पद खालिभएको २ दिन भइसक्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएपछि यतिबेला जनता आक्रोशित बनेको छ । २०७३ साल भाद्र २९ गतेबाट कार्यभार सम्हालेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त गराउन मुख्य भुमिका निभाएका कुलमान घिसिङलाई नै पुन नियुक्ति गर्नु पर्ने जनताको माग रहेको छ ।
यस बिषयमा उर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई अगाडि बढाउने तयारी गरेपनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको खबरहरु बाहिरिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल र तत्कालीन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले घिसिङलाई प्राधिकरणको प्रमुखमा नियुक्ति गरेका थिए ।
यसपटक पनि कुलमानलाई दोहोर्‍याउन प्रचण्ड र उर्जामन्त्री बर्षमान पुन सकारात्मक रहेको स्रोतले जानकारी दियो । कार्यभार सम्हालेको केही महिनाबाटै लोडसेडिङ हटाउन सुरु गरेका घिसिङले २०७५ बैशाखमा देशलाई लोडसेडिङ मुक्त घोषणा गरेका थिए । तर, घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्य हुनुमा सबैको मेहनत र सरकारको पनि ठूलो सहयोग रहेको बताउँदै आएका छन् ।
के कुलमान घिसिङको पुन नियुक्ति सम्भव छ ?
जनताले भगवान मानेका उज्यालोका हिरो घिसिङले अन्ततः ओैपचारिक विदाई पनि पाएनन् यसर्थ उनी पुन प्राधिकरण प्रमुखमा फर्किने झिनो आशा भने जिवितै रहेको छ । घिसिङ नदोहोरीने हो भने उनको विदाई हुने थियो होला ।
घिसिङलाई पुन नियुक्ति गर्न सामाजिक सञ्जालबाट सरकारलाई दबाब कुलमान घिसिङको कार्यकाल थपको माग गर्दै यतिबेला सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ । लेखक , चलचित्र निर्माता तथा अभिनेता दीपकराज गिरीले आफ्नो फेसबुकबाट सबैलाई साझ ५ मिनेट बत्ती निभाएर सरकारलाई दबाब दिन आव्हान गरेका छन् ।
आदरणिय साथिहरू !!
कुलमानजी को पून नियुक्तिको लागि जन दबाब स्वरूप आज बाट हरेक सॉझ आठ बजे ५ मिनेट बत्ति निभाएर ऐक्यबद्ता प्रकट गरौ….
त्यस्तै वरिष्ठ हाँस्यकलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै घिसिङको कार्यकाल थप गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ ।
एउटा जिल्लाको मत प्राप् गरे पछि कुनै पनि सांसद मन्त्री बनेर सिंगै मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिन योग्य हुन्छ ।
तर मेची देखि महाकाली हिमालदेखि तराई सतहत्तरै जिल्लाका सांढे ३ करोड जनताका आत्मादेखि रुचाइएको एउटा नाम हो श्री कूलमान घिसिङ
जो नेपालको ७७ जिल्ला मध्ये कुनै पनि जिल्ला, कुनै पनि पार्टि बाट चुनाव लडेमा आँखा चिम्लेर निर्बाचीत हुने निश्चीत देखिन्छ।
आम जनताको मतलाई अयोग्य ठानेर बेवास्ता गर्न सकिन्छ।
तर ७७ वटा जिल्लाको मन जितेको ब्यक्तिलाई हटाउने निर्णय गरिएमा जनता ले जिन्दगी भर चित्त दुखाउने छन।
लौ है आदरनिय नेताज्यूहरु जनताका तर्फबाट यहाँहरुलाई एक पटक सम्झाई दिने मेरो धर्म हो ।
जनादेशलाई सम्मान गरेर जनताको मन जित्ने नजित्ने यहाँहरुको स्वबिबेक र कर्म हो ।
कुलमानजी जस्तो सहि ब्यक्तीलाई प्राधिकरणको प्रमुख पदमा नियुक्ती गर्रेर देशलाई लोड सेडिङ मुक्त गराई दिनुहुने आदरनिय मन्त्रीज्यू र कुलमानजीलाई साथ दिनु हुने कर्मचारी लगायत सम्पूर्ण महानुभाबहरुलाई पनि जनताले धन्यबाद दिएका छन है।
एकजनालाई मात्र जस दियो हामीलाई दिएन भनी नसम्झिनु होला त्यो पनि भन्देकोछु मैले … …
यता सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पनि सामाजिक सञ्जालबाटै कुलमान घिसिङको कार्यकाल थप गर्न माग गरेको छ ।
कुलमान घिसिङ ज्यु, तपाईंको कार्यकालको निरन्तरता हुन्छ, हुनै पर्छ। यो मेरो विश्वास होइन, माग हो।यो मुलुकमा तपाई भन्दा योग्य मान्छे नै नभएको त पक्कै होइन होला तर अन्धकार यो देशलाई उज्यालो बनाउने र यो देशको युग नै बदल्ने तपाई जस्ता सपुतको मात्रै त्यो पदमा हक लाग्छ।तपाई शारीरिक,मानसिक र कानुनी रुपमा योग्य रहुन्जेल यो पदमा अर्को मान्छेको कल्पना गर्नु मात्र पनि “मेरालागि” महा पाप हो।प्रिय कुलमान जी, टेलिभिजनमा तपाईंकालागि धेरै बोले,आवस्यक परे सडकबाट पनि बोल्न आतुर छु। लेकिन, किन्तु,But, परन्तु, तर… केहि होइन,Just कुलमान घिसिङ..
Prevभावुक हुँदै प्राधिकरणबाट बिदा भए कुलमान घिसिङ , कर्मचारीले गरे बिदाई
Nextकुलमानलाई कर्मचारीले गरे बिदाई (तस्बिरहरू)
लालबाबु पण्डितको आक्रोश : उसोभए कर्मचारी र पत्रकारको पनि दसैँ भत्ता कटौती गरौं ! ‘विनोद चौधरी र लालबाबु पण्डित दुवै जनप्रतिनिधि हुन्’
कारुणिक फोटो : को’रोना सं’क्रमित भएपछि आमालाई झ्यालबाट हेर्दै एक छोरा